अपि र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको शेयरमूल्य समायोजन, कति भयाे नयाँ मूल्य ? - Everest Dainik - News from Nepal
अपि र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको शेयरमूल्य समायोजन, कति भयाे नयाँ मूल्य ?
अपि पावर र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा शेयरमूल्य समायोजन भएको छ।
नेप्से) मा अपि पावर कम्पनीको २९.३८ प्रतिशत हकप्रद सेयरपछी नेप्सेले प्रतिकित्ता २ सय ९६ रूपैयाँ कायम हुने गरी सेयरमूल्य समायोजन गरेको हाे । बुधबार कम्पनीको शेयर ३५३ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको थियो।
अपि पावर कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासनको मिति तय नगरेपनि बुक क्लोज भने वैशाख २९ गते (एक दिन) गरेको छ । बुक क्लोजको आधारमा अपि पावरको हकप्रद सेयर वैशाख २८ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुले मात्र भर्न सक्नेछन् । कम्पनीले ५६ लाख ७० हजार कित्ता हकप्रद सेयर विक्री गर्ने भएको हो ।
नेप्सेले एभरेष्ट इन्स्योरेन्स (EIC) ले प्रस्ताव गरेको ८ प्रतिशत बोनस शेयरमा शेयरमूल्य समायोजन गरी प्रतिकित्ता ७२० रुपैयाँ शेयरमूल्य कायम गरेको छ। मंगलबार कम्पनीको शेयर ७७८ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको थियो।
लाभांश वितरण तथा साधारणसभा प्रयोजनको लागि कम्पनीले बुधबार बुकक्लोज गरेसँगै नेप्सेले कम्पनीको शेयरमूल्य समायोजन गरेको हो।
बुधबार दुबै कम्पनीको समायोजित मूल्यमा आधारीत रहेर नेप्सेमा शेयर कारोबार खुल्नेछ।
स्थायी कमिटी निर्णयविपरित केपी ओलीको असभ्य बोलीः माधव नेपाल ‘कुलङ्गार र दलाल’ नेता भएकाे आराेप